仰光市中心数百名建筑工人罢工ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင် ရာနှင့်ချီသောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားများ ဆန္ဒပြနေ(中缅双语）（曹润盛供稿） – 美国南加州缅华网
首页/缅甸新闻 /仰光市中心数百名建筑工人罢工ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင် ရာနှင့်ချီသောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားများ ဆန္ဒပြနေ(中缅双语）（曹润盛供稿）
Construction workers gather as they protest demanding for labour rights at downtown area in Yangon, Myanmar, 19 January 2021. Hundreds of workers came out fromaconstruction site and stagedaprotest demanding their labour rights.
ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင် ရာနှင့်ချီသောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားများ ဆန္ဒပြနေ
By ထွန်းထွန်းမင်း on Tuesday, January 19, 2021 – 15:49
ဓာတ်ပုံ – လင်းဘိုဘို(အီးပီအေ)
ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိ Yoma Central ဟိုတယ်နှင့်အိမ်ရာစီမံကိန်းမှ ရာနှင့်ချီသောဆောက်လုပ်ရေး လုပ်သားများသည် လုပ်ခလစာအပြည့်အဝရရှိရန်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးခံစားခွင့်အပြည့်ရရှိရန်ဟုဆိုကာ ယနေ့(ဇန်နဝါရီ ၁၉ရက်)တွင် အဆိုပါစီမံကိန်းရှေ့၌ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေသည်။
Local News | ကျောက်မဲတွင် မိုင်းပေါက်ကွဲပြီး အရပ်သားတစ်ဦး ဒဏ်ရာရ
Advertorial | မြန်မာနိုင်ငံ၏ Cashless အသုံးပြုမှုကို အရှိန်မြှင့်တင်ခြင်း
ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုကို နေ့လယ် ၁နာရီက စတင်ခဲ့ပြီး ညနေ ၃နာရီခွဲအထိ အလုပ်သမားများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ ညှိနှိုင်းနေသည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းတွင် လုပ်သားအင်အား သုံးထောင်ကျော်ရှိသည်။ ဆန္ဒပြအလုပ်သမားများက ဗိုလ်ချုပ်လမ်းကိုပိတ်ဆို့ကာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“လုပ်ခလစာလည်းအပြည့်မရဘူး။ ကိုဗစ်ကာလမှာ အစိုးရကနှစ်ကြိမ်ပေးတဲ့ လူမှုဖူလုံရေးကြေးလည်းမရသေးဘူး”ဟု ဆန္ဒပြအလုပ်သမား ကိုလင်းလင်းထွန်းက ပြောသည်။
ထိုစီမံကိန်းကို ပြည်တွင်းမှ FMI ကုမ္ပဏီနှင့် ဟောင်ကောင်အခြေစိုက် Peninsula တို့က အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။
Sports | သြစတြေးလျအိုးပင်းတင်းကျပ်သော COVID-19 စည်းကမ်းများကို နာဒယ်နှင့် ဆီရီနာထောက်ခံ
Local News | ဇန်နဝါရီလအတွက် မီတာယူနစ် ၁၅၀ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြု
转载请注明：《仰光市中心数百名建筑工人罢工ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင် ရာနှင့်ချီသောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားများ ဆန္ဒပြနေ(中缅双语）（曹润盛供稿）》
新华网 2021年10月14日 图为缅甸民众和僧侣聚集在仰光市中心大金塔，欢 ...
仰光动物园将为“象姑娘莫莫”举办生日庆典 – 缅华网
缅华网 伊江树报导据10月12日出版的缅文《镜报》报导，仰光动物园将为人民大众所 ...
连接缅甸中部地区与掸邦东部的公路将提升为混凝土柏油马路 – 缅华网
掸邦东部地区 有30条公路，这当中密铁拉(Meiktila)—东枝—景栋(Ken ...
中国政府新一批援助缅甸新冠疫苗运抵仰光 – 缅华网
缅甸中央银行宣布准许境内合法兑换人民币和日元 – 缅华网
2021年10月13日讯 缅甸中央银行2021年10月12日发布公告称，此前根据 ...
和平进程指导小组（PPST）正与东盟特别代表合作寻找解决政治危机的方法 – 缅华网
十一新闻周刊 10月12日讯 和平进程指导小组（PPST）负责人；新孟邦党副主席 ...
缅华网 星辰报导 十一新闻周刊10月11日讯 卫生与医疗部主任南达温博士（Dr. ...
认识东南亚，从那里的美食开始吧 – 缅甸採购
福建省侨界青年联合会向缅甸中华总商会捐赠分子筛制氧机、清肺排毒汤 – 缅华网
来源：缅甸金凤凰中文报社 【缅甸金凤凰报记者 胡安娜 仰光报道】同呼吸共命运，心 ...
缅甸新闻汇集：2020—21财政年度缅甸向国外出口蜂蜜2600多吨 – 佩华网
据 10月3日出版的《苗瓦底》日报报导，缅甸蜂蜜每年都有出口国外，在2020—2 ...
LAX新停車場增4300個停車位 近 500 個是電動車充電站 | 星島日報
目前已为约4000名YBS驾驶员接种了新冠疫苗 – 缅华网
缅华网 丘文 缅甸 叶国治 中国新闻网 星島日報 草蝶 朱徐佳 倩兮 苏顺路 了因 苏丽蓉 卓叶 星島日报 丛中草 BBC News 中文 你好中国 蔡煜群 林郁文 德光 缅甸中文网 碧蓝色甘马育 BBC News 伍全礼 晨阳 中国 更生 林鸿沛 元旦征稿 南友 只言片语 谢玉清 春水 舒云 朱雪雪 许均铨 南加州缅华联谊会 炳辉 高德光 中国女中